Usoro ọgwụgwọ ntụgharị, ALP na ụmụ nwoke dysphoric okike. | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Ntughari mgbanwe, ALP na ụmụaka dysphoric okike.
Ọ dị ka mmeri maka ọgụgụ isi mgbe Federal Australian Labour Party gbaghaara ebumnuche ya nke mmebi nke imebi omume 'ntụgharị na ọgwụgwọ mmegwara na LGBTIQ + ndị mmadụ' na Nnọkọ Mba Ọchịchị na Adelaide na Disemba gara aga. Kama, ọ bụ mmeri nke aghụghọ okwu: kama itinye ume na ịchụso ebubo mpụ, ịkagbu ihe a sị na ọ bụ 'ọgwụgwọ ntụgharị' ga-adị mfe inweta site n'ụzọ dị mfe nke usoro mbata obodo na njiri mara oke ọgụ.
Louise Pratt, WA ALP Senator na-eduga onye Rainbow Labour, gosipụtara na usoro ahụ dabere na 'La Trobe University' ọmụmụ ', na-emesi obi ike na' Party anaghị agbasi mbọ ike megide usoro ọgwụgwọ karịa oge ọ bụla '. [I] Ọmụmụ ihe ahụ gaara abụ 'Na-egbochi Nsogbu, Na-akwalite Ikpe Ziri Ezi. Zaghachi na ọgwụgwọ ntụgharị LGBT na Australia '[Ii]. Nke ewepụtara na 2018 sitere na Lawlọ Ọrụ Iwu Iwu Ndị Mmadụ na Victoria na Australian Research Center na Mmekọahụ, Ahụike na Society na La Trobe, ọ na-achọ ikpughe 'eziokwu' nke usoro ọgwụgwọ ndị a, 'gosipụta' ahụhụ ha kpatara, nyere okpukpe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ aka na-enyekwu nkwado, na ịtụle 'iwu na usoro iwu iji gbochie nkwalite na ịnye ọgwụgwọ ọgwụgwọ na omume ndị yiri ya, gụnyere obodo okwukwe na otu, yana ndị ọrụ ahụike edebanyere aha na ndị na-edeghị aha'[iii].
Ebe ikike a na-akwalite ikike LGBTI. Ulo nyocha a mepụtara Mmemme Achọghị Nchekwa site na echiche ya banyere ịdị ọcha nwoke na nwanyị. Emepụtara ndụmọdụ na ndị Kọmịshịaị Victoria maka nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ, mkpesa ahụike, na ahụike uche, yana ndị otu LGBTI Taskforce nke gọọmentị Labour.[iv].
N'okpuru iwu nke 'Mmachi kwesịrị ekwesị na ntaramahụhụ' maka ndị na-agwọ ọgwụgwọ, ọmụmụ ihe ahụ kwadoro 'ndokwa nke ntaramahụhụ obodo karịa mmebi iwu' n'ihi na ha 'tozuru oke iji gbochie ma zaghachi nsogbu ahụ'. 'Nke kachasị' nke pụtara 'ịdị irè' gosipụtara site na nkọwa na-aga n'ihu: 'Iwu mpụ ga-achọkwa ka a kọwaa ihe (ma omume na echiche uche) nke mmejọ ahụ na nkọwa doro anya ma gosipụta na enweghị ezi obi abụọ. Dị ibu akaebe dị otu a nwere ike isi ike ị nweta maka okwu ndị a, ọkachasị n'ọnọdụ ebe naanị ndị akaebe na omume ahụ bụ onye arụrụala na onye mere ihe ọjọọ '.
A ga-abawanye mmanye iwu obodo site na inye 'ikike' nye onye nwere ọfịs ọrụ kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọkpụrụkpụ (ma ọ bụ Kọmịshọna Mkpesa Ahụike ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ) 'iji' mejupụta usoro a megide ma ndị mmadụ ma ụlọ ọrụ '.[v]
Gini bu ‘ogwu ngbanwe’?
Dabere na ọmụmụ a, ọ bụ 'okwu nchepụta iji kọwaa mbọ iji' gbanwee 'ndị mmadụ site na mmekorita nwoke na nwoke na nwoke na nwanyị na nke ọpụrụiche nwoke na nwoke na nwanyị.[vi]. Na omume, gbasara ụmụaka dysphoric okike, o nwere ihe dị mfe ọ pụtara: ihe ọ bụla nke na - ebelata ahụhụ ha site na ịnwa itinye uche ha na okike chromosomal.
Ruo n'oge na-adịbeghị anya, usoro ọgwụgwọ ọrịa na-abụghị ọgwụgwọ maka ụmụ nwoke na ụmụ ha ndị ezinụlọ nwere mgbagwoju anya bụ ụkpụrụ, ọtụtụ na-akọkwa na ha dị irè, dị ka a tụlere n'okpuru, mana ọganiihu na teknụzụ ọgwụ na afọ 1970 mere ka ahụike nke ọgwụgwọ na ọgwụ iji gbochie oge ntorobịa, yana homonụ iji kwalite atụmatụ nke nwoke na nwanyị. A ga - ejikọ ndị a na 'nkwenye mmekọrịta mmadụ na ibe ya' na okike a họọrọ ọhụrụ, ma na-esochi 'ịwa ahụ' ịwa ahụ gụnyere mastectomies, na uro-genital extravaganzas iji mimomie akụkụ ahụ na njikọ nke nwoke na nwanyị, n'okpuru oge ndụ nke ahụike ndabere.
A bịara mara ụzọ a ọgwụ dị ka Protocol Dutch maka na ebido ya na Holland, mana a na-eme ya ugbu a na Western Western. Ọ na - ebute 'mmezi mmekọahụ nke anụ ahụ' nye onyinyo dị n'uche. Nkedo bụ ihe pụta ụwa.
Nke a bụ ntinye aka na Protocol Dutch na a naghị elezi ọgwụgwọ ndị mbụ anya, belụsọ ka a katọọ ya, na-enweghị nkọwa, dịka 'ọgwụgwọ ọgwụgwọ'. N'ezie, a ga-amachibidoro ha iwu ma ọ bụrụ na atumatu ndị ọrụ nwere ụzọ ha.
Mgbalị mbụ omebe iwu na mkpochasị dị na Victoria Complaints Health Complaints Act 2017, onye nyere ya, dị ka Minista Ahụike Victoria si kwuo, Jill Hennessy, 'ga-eweta ụzọ iji mesoo ndị ritere uru na omume arụrụala nke usoro ntụgharị nwoke nwere mmasị nwoke… nke na - akpata ịda mmụọ dị ukwuu ma na - emebi ahụike nke ndị otu na - eto eto nke obodo anyị.[vii] Na nyocha, na mmeri na ọkwa Federal, mkpochapụ ya ga-abụ 'mkpa onwe onye' maka Labour Shadow Minister for Health, Catherine King[viii].
Mwakpo dị otú a abụrụla okwu dịịrị onye ọrụ nke Victoria Premier, Daniel Andrews, na-akpọsa na Nganga March na Melbourne na Feb nke 3, 2019, 'anyị ga-ewebata iwu ọhụrụ iji hụ na a na-akpọ' ntụgharị. 'ọgwụgwọ megidere iwu-otu ugboro'. A ga-adọkpụ ụdị ọrụ ndị a, 'na-ekwu na ha nwere ike ịgbanwe mmekọahụ ma ọ bụ njirimara nwoke na nwanyị' site n'ọgbọ ọjọọ gaa n'ọchịchịrị kachasị. Ha abụghị 'ọgwụ ma ọlị. Ọ bụ omume ọjọọ, ajọ mbunobi na nkwanye ùgwù. ' Banyere ụmụaka na-arịa ọrịa dysphoria okike, isiokwu a ga-adọta akụkọ banyere usoro ọgwụgwọ na-aga nke ọma na ọkụ ma na-arụ ụka na atumatu gọọmentị nke Labour nwere ike ịkatọ nwatakịrị na-arịa ọrịa nyocha na 'Protocol Dutch' nke dọkịta.
Ọ bụ ezie na ọ ga-abụ ihe iwu na-akwadoghị ma ọ bụrụ oge igbu oge izipu nwatakịrị n'ụlọ ọgwụ na-eme Nchịkwa Dutch, ndị na-agwọ ọrịa n'ụlọ ọgwụ ndị ahụ ga-enwere onwe ha, ọzọ, iduzi nwatakịrị ahụ n'akụkụ ihe ọhụụ ọhụụ a na-akwalite na weebụ, oge niile Nwatakịrị ahụ na-enwe mmetụta dịka mgbanwe, ọ bụrụhaala na ọ nweghị echiche ọhụụ na nke a mụrụ ya.
N'eziokwu, 'ọgwụgwọ ntụgharị' enwetawo aha ọjọọ n'ihi na mbọ iji 'tọghata' ndị na-edina ụdị onwe ha na nwoke na nwanyị inwe mmekọ nwoke na nwoke na nwanyị nwere njikọ nwoke na nwanyị na akụkọ ihe mere eme metụtara akụkọ ihe mere eme na omume obi ọjọọ na nke uche, yana usoro ọgwụgwọ ọmịiko. Ndị nke mbụ gụnyere ịta mmadụ ahụhụ, na nhụjuanya ahụike dị ka homonụ, lobotomies, na castration. Mana, gbasara ụmụaka, ọ nweghị nke ihe ndị a ma ọ bụ mmetụta ọ bụla dị egwu nke psychotherapeutic na-enyere nwata ahụ aka inwe mmekọahụ na mmekọrịta nwoke na nwanyị ka a kọọrọ na ọgwụ ọgbara ọhụrụ. N'aka nke ọzọ, nnwale nnwale nke Dutch Protocol iji gbanwee nwatakịrị ka ọ bụrụ onye na-abụghị nke nwoke bụ nke sitere na homonụ, enwere ike ịsị na ọ na-eme lobotomy kemịkal, ma na-agụnye castration.
Kedu ihe akaebe nke ihe omumu nke La Trobe wetara na tebụl?
Ọmụmụ ihe ahụ na-ekwu na e nwere 'ihe akaebe dị ukwuu' nke mmerụ ahụ site na 'ọgwụgwọ ntụgharị' dị ka ihe nkwenye gosipụtara site na ahụmịhe ọ na-enye nke ndị na-aza 15 zụrụ site na 'netwọkụ LGBTI dị iche iche, ndị na-achọ okwu na ndị na-edina ụdị ndị nwanyị' Ranging sitere na 18 rue 59 afọ, iteghete mara dị ka nwoke na nwoke, nwoke dịka transgender, otu dị ka nwanyị na nwoke na nwanyị, na otu dịka ọnụọgụ abụọ. Iri na atọ ahụ sitere na Ndị Kraịst, otu onye Juu na otu Buddha.
Ha niile ekerewo na 'ọgwụgwọ nke mmụọ', gụnyere ndụmọdụ ndị mmadụ n'otu n'otu na ndị otu, mkparịta ụka na nkà mmụta okpukpe na ekpere, mana a kọrọ na nke a emetụtaghị usoro mmekọahụ, ebe a na-abawanye nhụsianya site na nrụgide siri ike na nkwenkwe ọdịnala ọdịnala. Dika odi, ihe omumu a kwuputara na ntughari uche bu ihe nzuzu, ihe ojoo, kwesiri ka amachibido ya iwu, ma okacha nke ndi Protestant nke Christian, kwesiri ikuziri ma obu manye ha ikwanye idi na nmeko di iche.
Otu n'ime akaebe iri na ise ahụ, chọrọ aha pụrụ iche n'ihi na a na-ekwe ka mmekpa ahụ ọ, Jamie, mara na ọ nwetara ma ọ bụrụ na akwadoghị ya ime mkparịta ụka ahụ dum. Na 17, na njedebe nke 80, na Australia, mgbe o kwupụtara na ya 'hụrụ nwanyị nwanyị n'anya', ọ na-ebo ebubo na a kpọtere ya n'abalị ma kpọga ya na ngalaba ọgụgụ isi izu abụọ ebe a manyere ya 'ịnọdụ ala na ịsa ahụ jupụtara na akpụrụ mmiri mgbe a na-agụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ n'elu ya, ka a na-eke ya n'àkwà ya n'abalị ma na-ehi ụra, ka otu nwoke na-agba ya ajụjụ ma na-ata ya ahụhụ 'na ịbụ onye' ejidere… inwe electrode na labia m, na ihe oyiyi na-atụ n'uko; a otutu mgbu site na electrodes na-ekpe n'ebe maka ezi a ogologo oge mgbe e mesịrị; ekpughere na naanị '.
Ọmụmụ ihe ọmụmụ La Trobe na-akatọ ụdị ọgwụgwọ a n'ụzọ ziri ezi, na-ezo aka n'ọrụ nke mba ụwa megide ịta ahụhụ. Ma, akụkọ a na-akọghị akụkọ a ọ̀ na-eme ka e kwenye? A ga-ezochi ụdị mmetọ ahụ na Australia mgbe ekpughere nkọcha 'ụra miri emi' na Hospitallọ Ọgwụ Chelmsford, Sydney, na 60 na 70, ma ọ bụ mmebi Ward 10B na Townsville na 70 na mmalite nke 80's? Ihe ebubo Jamie chọrọ nyocha nke gọọmentị tupu nkwalite maka ọdịmma nke ndozi ma ọ bụ ịmepụta iwu. Ọnọdụ uche gbagọrọ agbagọ n'ihi mmụọ ịhapụ 'ebe nchekwa (ma ọ dị mkpali)'. N'okwu Jamie, anyị nọ n'ihe ize ndụ nke ịgbakwunye pathology nke nkwuputa nkwuputa na-enweghị akwụkwọ.
Gịnị bụ adịghị ike banyere nke a La Trobe ọmụmụ nke bụ otú mmetụta maka Labour? Okwu Jamie pụtara na mgbasa ozi karịa ịkọwapụta. Ndi mmadu iri n’ise n’ahia bu onu ogugu di ala. Nhọrọ onwe abụghị onye nnọchiteanya. Enweghi aha onye okpuru okwu: otutu mmadu enyerela aka site na 'ndumodu nke ime mmuo'? Mbanye mgbe mgbasa ozi na otu ndị agha siri ike na-ele mmadụ anya n'ihu. N’adabaghi ​​adaba, ntuleghari ahuhu banyere ndi nne nne America nwere umu aka ndi nwanyi nwere Rapid Onset Gender Dysphoria nke kwubiri na ha n’enwe oria nke ‘nmekorita nke ndi mmadu na ndi ozo’, bu ihe omuma banyere oria ojoo, nke ha nwere ike weghachite, ma obughi oria ndu. ndị na-eme ihe gbasara nwoke na nwanyị, bụ ndị mahadum jụrụ ma wepụta na webụsaịtị maka 'mbanye n'ọrụ sayensị' site na saịtị ndị ahọpụtara[ix].
Ikekwe akụkụ kachasị na-esiteghị na ọmụmụ ihe ahụ bụ nchịkọta nke ahụmịhe ndị okenye nye ụmụaka. Agbanyeghị na ọ bụ ihe siri ike ịgbanwe ntụgharị uche nke okenye, achọpụtakwala na imirikiti ụmụaka ndị nwere mgbagwoju anya ga-ebuputa na okike nwoke na nwanyị site na ntozu nwoke. Ọmụmụ ihe ahụ jiri apụl tụnyere oroma. Ma ọ dị ka ọ nwere mmetụta pụtara ìhè na Party Party na National Platform.
Kedu ihe ọmụmụ La Trobe na-atụ aro?
Nyere ọmụmụ ihe a metụtara mmetụta nkwụghachi ọhaneze site na ebumnuche Ọrụ Labour nke mebiri usoro ntụgharị uche, yana na anabataghachi nlọghachi azụ na Nzukọ Mgbakọ Mba na nso nso a, enwere ike inwe mmetụta ọzọ: ikekwe ọ bụ mbipụta na-acha anụnụ anụnụ maka ịme ihe mgbe mmeri ntuli aka. Ya mere, ekwesịrị ka ndi oru ahu ike, na nkuzi, na nka nke lelee lelee ya.
Ọmụmụ ihe ahụ na-akpọ ka e mee ka Iwu Victoria Complaints Act (2017) sie ike, ma bụrụ onye nkuzi maka ndị ọzọ Australia. Ekwesiri imesi ya ike (nihi na odiri ya ka anaghi ahuta ya) na iwu ahu enweela ikike iji wezighachi ihe ọdịnala nke ejiri gosiputa na aka ya di ọcha rue mgbe egosiputara na ikpe mara ya. Ms Hennessy kwupụtara mkpa ọ dị 'ịgbanwe onus' nke 'achọrọ onye eboro ebubo iji gosipụta okwu iji gosipụta, ma ọ bụ bulie ihe akaebe iji gosi, na aka ya adịghị mma.' Onye Minista ahụ chọrọ ime ka obi sie ike, na agbanyeghị, ọ bụ 'n'echiche na enwere ihe ize ndụ nleghara anya na ndokwa ndị a ga-ekwe ka amata onye aka ya dị ọcha' ma kwupụta na ha 'dakọrịtara' na Nkwekọrịta nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Ọrụ Dịịrị 2006 '[X]. 'Ntughari onus' a nwere ike ịdakwasị onye ọ bụla nke na-ala azụ ịgagharị nwatakịrị nọ ná mgbagwoju anya n'ụlọ ọgwụ na-eme Nchịkwa Dutch: site na ndị dọkịta ahụike na ndị ọkà mmụta sayensị, ndị ndụmọdụ ụlọ akwụkwọ, ndị isi na ndị ozuzu aturu.
Enwere ike ịgbagha ya na Iwu Mkpesa nwere ikike zuru oke iji menye ụjọ na ịta ntaramahụhụ mana ọmụmụ a chọrọ ihe ndị ọzọ. Ọ chọrọ iji dochie ebumnuche a na-akọwaghị iji wepụ ọgwụgwọ ntụgharị na iwu 'akọwapụtara nke kachasị ịkagbu mmebi ntụgharị, ma ọ bụrụ na a na-eme mkpesa otu onye'. Ọ chọrọ ịchọpụta ihe site na-amanye 'onye omebe iwu itinye aka iji chebe ụmụaka pụọ ​​na omume ntụgharị, n'agbanyeghị ọnọdụ ma ọ bụ usoro iwu'. Ka ọ dị ugbu a, Kọmịshọna Mkpesa Ahụike Victoria na-eme nyocha 'omume ntụgharị n'emeghị mkpesa.
Ọ chọrọ njikwa echiche na nrube isi nke ndị na-agwọ ọrịa okike ụmụaka nwere mgbagwoju anya site na okike nke ndebanye aha pụrụ iche (nke otu) ga-abụ 'n'okpuru ọzụzụ chọrọ na koodu ọkachamara', agbakwunyere site na 'akwụkwọ ntuziaka dị mkpa' nke na-emesi ike 'usoro ọgwụgwọ ntụgharị' 'ekwekọghị n'ọrụ ọrụ aka ha' ma dọọ aka ná ntị na 'ịdọ aka ná ntị' ga-etinye ya n'ọrụ.
Ndị nnọchi anya ike ndị uwe ojii ga - eme ka irube isi na Line Line a bụrụ nke ndị ọrụ nlekọta ahụike dịka 'Elekọta Ahụike Ahụike' kwesịrị 'iwusi' koodu 'ike ma gbochie omume ntụgharị ma hụkwa na iwere ya mee ihe. dị ma na-arụsi ọrụ ike site n'aka ndị ọkachamara ahụ dị mkpa '. N’akụkụ, Registrationlọ Ọrụ Ndebanye aha Ndị Ọrụ Ahụike Australia (AHPRA) na-enyocha 'koodu omume' ọhụrụ nke enwere ike ịchọta dọkịta 'enweghị ọrụ ọhụụ' site na ịkwupụta ọha na eze nke na-agbagha nkwenye ndị a ma ama, si otú a belata ntụkwasị obi obodo ma na-eme ka ụfọdụ nwee mmetụta ' ọdịghị nchekwa '. Ntaramahụhụ gụnyere idebanye aha akwụkwọ.
Ọmụmụ ihe ahụ chọrọ ka ego ụlọ akwụkwọ dabere na mmachi nke 'usoro ọgwụgwọ' mgbanwe site na ndị ndụmọdụ, inye 'ọzụzụ' n'ihe mmerụ ahụ ha, ma gosipụta mmata nke ọrụ ịkpesa 'iwu akwadoghị' omume 'ọrụ nchedo ụmụaka'. Omume dị otú a na-agụnye ịgọnarị nwatakịrị na ụlọ ọgwụ okike.
Ọ na-achọkwa ego gọọmentị maka ndị nwere nsogbu site na usoro ọgwụgwọ ntụgharị, yana nyocha maka omume ndị a na 'òtù ndị sitere n'okwukwe' karịsịa 'obodo Christian ndị Protestant'.
Na mmechi, ọ na-achọ mgbochi nke mgbasa ozi ọha na-akwalite 'ọgwụgwọ ntụgharị' nke, ya na ebubo nke 'enweghị ọrụ' nke AHPRA, ga-ahụ na nsogbu ozugbo onye ọ bụla na-eme ihe chọrọ ikwu okwu nke ọma na usoro psychotherap, ma ya fọdụkwa ịgbagha nyocha Protocol nyocha nke Dutch.
N’ileghachi anya na usoro ọgwụgwọ ndị uche gara aga, ugbu a ka a ga-enye iwu ka ọ bụrụ ‘ọgwụgwọ ọgwụgwọ’. Hà na-asọ oyi?
Ejighi edetu dysphoria di na nwata rue ihe ndi 1970, na tupu oru mmepe Dutch na nmezu nke 80, otutu ogwu di iche-iche na-adighi nma. Dabere na Zucker na Green, ndị a gụnyere 'ọgwụgwọ omume, psychotherapy, ndụmọdụ ndị nne na nna, ọgwụgwọ ezinụlọ na ọgwụgwọ otu' nke mesiri ike gosipụtara 'usoro ntụgharị uche' nke ihe kpatara dysphoria okike: ọ bụ nsogbu mbụ nke nwatakịrị ahụ, ma ọ bụ nsogbu nke abụọ. n’ezinụlọ ya.
Ọtụtụ ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ kwusiri ike n'echiche ezinụlọ, ọkachasị na mmekọrịta ụmụ nwoke na nne nke ghọrọ mmekọrịta 'symbiotic' na-eme ka njuta nwanyị mara nwa nwoke. Uche a, n'ezie, na-eche echiche dị ugbu a nke na-akwado njirimara nwoke na nwanyị na-ebilite n'ime nwatakịrị ahụ: adịghị mkpa na chromosomes, ụdị mmụọ nke okike na-ebilite, n'ụzọ dị mwute, nwere ike ịchọta onwe ya na ahụ adịghị mma.
Na 1971, Spensley na Barter nyochara ụmụ nwoke 18 na-eto eto nwere afọ ndụ nke 14.9, na-ekwubi 'ndị nne niile na 77% nke ndị nna na-arụ ọrụ na arụmọrụ… na-agba ume ịgagharị agagharị nke ụmụ ha'.
Na 1975, Bates et al nyochaala ahụmịhe ya na ụmụ nwoke 'ụmụ nwoke na-emekpa nwoke na nwanyị' 29 na ezinụlọ ha aka, oge ha ji zụlite 'usoro ndị yiri ka ọ ga-adị mma' iji melite ụdị nwatakịrị na-egosipụta oke akparamagwa, ikike mmekọrịta, na mmekọrịta ezinụlọ. . Ha kwubiri 'nsogbu omume… na-etolite, ma a na-echekwa ya mgbe niile dị ka ọrụ nke mmekọrịta ezinụlọ'. Ọnwa iri na asatọ agachara ọgwụgwọ, ndị nne 17 akọọla 'mmụba dị nta n'ọdịdị', na mmụba na nka mmekọrịta na akparamagwa ọha.
Site na 70's Rekers na ndị ọrụ ibe ha na Mahadum Florida kọọrọ mgbe niile gbasara akparamàgwà ha na njikwa mmekọrịta uche nke dysphoria okike. N'ụzọ bụ isi, ha kwụghachi omume omume nwoke ma leghara omume nwanyị anya na ụmụ nwoke na-arịa ọrịa dysphoric. Ndị na-eme nnyocha nọgidere na-enwe 'nsogbu ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị gwụchara ọgwụgwọ ha' nwere nnukwu mmụba ogologo oge 'ọ dịkarịa ala afọ anọ[xi]. Youngmụaka dị obere na-anabata omume ahụ.
A katọrọ Rekers maka ebubo ịkwado agwa dị oke mma mana zaghachiri site n'ịkpọpụta 'ọnọdụ akparamaagwa kachasị dị mma nke nwatakịrị ahụ maara nke ọma na ọnọdụ nwoke na nwanyị. N'ime oge a, ekwesiri inwe mgbanwe mgbanwe gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị '[xii].
N'ibu amụma nke ndị na-eme ngagharị iwe ugbu a, Rekers nọ na-eche ma ndị nkatọ ya kwenyere 'transexualism' bụ 'iche ma ọ bụ ihe na-adịghị mma n'anya n'anya ọha mmadụ nwere ụkpụrụ na-agbagọ agbagọ na mgbe ochie'. Ọ zara 'ọ bụ ihe doro anya na nwata nwoke ikwu ugboro ugboro na ya nwere ike ịmụ ụmụ, ma yikwasị uwe nne na-enweghị isi. O bu ihe omimi nye mmadu ikwuputa na ogha ya n’enweghi ihe omuma ya, si na ya choro ka ewepu ya ahihia ’. Ọbụna nke gbagwojuru anya, Rekers kọrọ na otu ndị nne na nna kwenyere n'ihe ọzọ ga-eme ka nkwanye mmụọ karịa ụgwọ ọrụ kwesịrị ịmalite ma, n'ihi ya, enyefe nwatakịrị ahụ 'swats' maka akparamagwa nwoke na nwanyị n'oge ọgwụgwọ, yana abụọ maka akparamagwa akparamagwa.
Na 1974, Pauly chịkọtara akwụkwọ ụwa gbasara 80 gbasara transsexualism nwanyị mechie: 'Ndị nne na nna kwesịrị ịmatakwu mkpa ọ dị ịkwalite ụmụ ọhụrụ niile maka njirimara nwoke na nwanyị ahụ nke kwekọrọ na njirimara ha. Enwere m ike icheta gbasara akụkọ ga-jọkarịrị njọ karịa ịbụ onye a na-egbu egbu na ndụ ụdị esemokwu ezinụlọ ma ọ bụ amaghị nke a na-akpata nsogbu njirimara nwoke na nwanyị.[xiii]. Mmeghachi nke nwoke na nwanyị bu nnwere onwe nke nkwenye ugbu a na nkwuputa mbido nke isi ya.
Na 1976, Stoller kwuru na 'naanị… ọtụtụ ụmụ nwoke ụmụ nwanyị sitere na nne bụ onye, ​​ma ọ nwere nzube ọjọọ ma ọ bụ nke ọjọọ, na-echekwa oke, yana nna nke nwere obi ọjọọ ma ọ bụ na-anọghị (n'ụzọ nkịtị ma ọ bụ n'ụzọ mmetụta uche'[xiv]. O kwubiri, bido n'isi, psychotherapy 'enwere ike ibelata ma ọ bụ wepu' omume nwoke na nwanyị. Psychotherapy gụnyere 'ikpughe, nkọwa na mkpebi nke esemokwu site na nghọta' tinyere agbamume nke 'ịbụ nwoke' na nkụda mmụọ nke 'nwanyị' na nwatakịrị ahụ. Usoro ọgwụgwọ a nwere ike ime ka nne ghọta na ịdabere na nwa nwoke dị ka 'naanị ezigbo nwoke n'ụwa', na nna dị anya na-abawanye 'nkwa maka nwa ya nwoke, nwunye ya na ezinụlọ ya'.
Na 1977, Davenport na Harrison kọọrọ nwa agbọghọ dị afọ 14 with nwere akara dysphoria nwoke na nwanyị
onye 'kwenyesiri ike na o gosipụtara onwe ya dị ka nwa nwoke na uwe, olu, mmegharị, ọdịmma na nghazi', ebe ọ na-ezobe ara ya na-eto eto. O siri ọnwụ na ịwa ahụ mgbanwe mmekọahụ (nke ọ na-aghọtachaghị ihe ọ bụla) mana a nabatara ya n'ụlọ ọgwụ psychiatric ma nwee ọgwụgwọ psychotherapy oge niile maka ọnwa iri abụọ. 'Ezubere iche maka ndị nọ n'afọ iri na ụma', nke a gụnyere 'itinye aka na-arụsi ọrụ ike, ụlọ akwụkwọ ọgwụgwọ, usoro ntụrụndụ na ọrụ'. Nke nta nke nta, ọ laghachiri na ọdịdị nwoke ya na afọ abụọ mgbe ọpụpụchara 'ọ pụtara na ọ nakweere njirimara nwanyị.' 'Understandghọta kpakpando ezinụlọ' dị mkpa na ọgwụgwọ ahụ.
Na Australia dị ugbu a, dysphoria dị otú ahụ na -akpata ara na ọchịchọ maka ịwa ahụ nwere ike ime ka ọ bụrụ Mastectomies abụọ, dị ka ụmụ agbọghọ ise na-erubeghị afọ 18: 2 na 15. A ga-egbochi ọgwụ na-eto eto n'oge uto, ọ bụrụkwa na testosterone emee ihu na ntutu ahụ. A ga-enye ya aha na njirimara, o nwekwara ike ịtụ anya idozigharị akụkụ ọmụmụ nwa nwanyị, ọgwụ ike yana oge ị medicalụ ọgwụ.
Na 1978, Zuger kọrọ otu 10 na-esochi ụmụ nwoke na-ahụkarị anya nke mechara nyocha na uche gbasara mmụọ. Ọ choputara 'ụdị' ire ere 'ma ọ bụ ire ọkụ site na mgbaama ndị a, kpamkpam na ụfọdụ, akụkụ ụfọdụ na ọ bụghị otu ntakịrị'[xv].
Na 1980, Lothstein kọrọ afọ ise na-esochi ndị na-eto eto 27 na-eyi uwe ejiji na afọ pụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 17, na-akọwapụta ndị isi 'nrụgide' metụtara njikọ ha maka ịwa ahụ maka mmekọahụ. Ndị a gụnyere mgbanwe mmekọrịta na nso nso a, mmekorita anụ ahụ, na nwoke idina nwoke ma ọ bụ nwanyị idina nwanyị. Ọ kọrọ na 'ọgwụgwọ chọrọ maka ịwa ahụ ugboro ugboro na-eji teknụzụ. O kwubiri na 'ọgba aghara nke diski na nwoke na nwanyị nọ n'oge ntorobịa nwere mkpọrọgwụ nke mgbagha uche' yana 'enyere mgbagha ịwa ahụ na ikekwe ọfụma ọfụfụ', nnwale nke psychotherapy bụ ọgwụgwọ mbụ nke nhọrọ. Lothstein dọrọ aka ná ntị 'ịwa ahụ kwesịrị ka atụlee ya ruo na njedebe nke oge uto (afọ 21) mgbe nyochachara nke akparamaagwa, nyocha dị ogologo na nyocha mmụọ'[xvi].
Dị mkpa maka 'ugbu a' nkwupụta 'nke njirimara nwoke na nwanyị ọhụrụ nke ndị nne na nna na ndị ọchịchị ndị ọzọ, Lothstein chọpụtara' nne ma ọ bụ nna na-agba ume, ma ọ bụ nwanne nwere ọmịiko, onye na-akwado uwe ejiji na ọchịchọ ya (maka ịwa ahụ), nwere ike ime ihe ọ bụla gbasara mmụọ. siri ike '.
Na Australia dị ugbu a, ndị na-eto eto nwere ike ịwa ahụ maka mgbanwe mmekọahụ mgbe 18, na mastectomies ọbụlagodi n'okpuru arụmụka dị oke egwu ịwa ahụ dị otú ahụ, na-enye ohere nke sacicone sacs. A na-akọ na ndụmọdụ mbụ dị ka ihe na-aga n’ihu: ọ nweghị ihe dị ka teknụzụ psychotherapy nke oge Lothstein nke dị adị. N'ezie, n'okpuru gọọmentị Labour, a ga-amachibido mgbasa ozi banyere ya.
Ka ewee wube ya ụdị ọgwụgwọ mmụọ a ka a na-eme na mba ofesi, na 1987, n’ezie, akụkọ ndekọ ha dị oke egwu pụtara na Medical Journal of Australia, mgbe Robert Kosky, Onye isi nke Ọrụ Ọrịa Uche na Hospitallọ Ọgwụ Perth Princess Margaret maka Childrenmụaka, na Director State nke Childmụaka WA. na chilọ Ọrụ Maka Ọrịa Uche, zara ajụjụ a '-mụaka nwere oke mmụọ: ọgwụgwọ ọrịa inpatient anaghị enyere aka?'[xvii]
Site na ahụmịhe na ụmụ nwatakịrị agadi nke 8, ụmụ nwoke asaa na otu nwanyị, nke e zoro n’agbata 1975 na 1980, Kosky kọrọ na nsogbu nke ịbelata na-amalitekarị ‘ihe dị ka afọ abụọ’ mgbe nne ma ọ bụ nna nwere obi ụtọ, wee chọpụta na, mgbe Nwatakịrị yi uwe ndị na-abụghị nwoke ibe ya, egwuregwu ọnụ bụ ihe egwuregwu '. E mesịa, 'nwatakịrị ahụ yi uwe nke ya.'
Kosky hụrụ 'ndị na - enweghị obi ụtọ (ndị nne na nna)… karịsịa nne na nna nke nwoke na nwanyị na nwanyị na nwanyị yiri ka ọ na-ejikọ n'ụlọ, na-anọ naanị ya, ya na ndị ụlọ akwụkwọ ole na ole' ma bụrụ onye kwuru na 'mmekọrịta chiri anya nke nwa ahụ.' Onye nne na nna nke nwoke na otu nwanyi na - ano adighi ano.
O kwubiri na uwe eji ejiji 'abụghị naanị, ma ọ bụ nsogbu nke isi… Obi erughị ala, nchekasị, echiche igbu onwe ya, iwe iwe na enweghị ike ịmụta akwụkwọ nke ọma n'ụlọ akwụkwọ bụ ihe ndị a ka ọtụtụ. Dị ka ọ dị n'ụdị akparamagwa nwoke na nwanyị, ihe ndị a pụtara na ha dị elu na mmekọrịta mmekọrịta nne na nna na ụmụ '. Ọ chọpụtara na "nsogbu dị mkpa n'ọnọdụ ndị a bụ enweghị ike nne na nna nke onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya ịnabata nwa ahụ, belụsọ na ọnọdụ nwa ahụ ruru nwa ahụ ụfọdụ. Ọ kọwara na iji merie echiche nke onwe ha, ndị nne na nna 'zụlitere echiche efu banyere nwatakịrị… (na-agọnarị) mmekọahụ nke nwatakịrị ahụ' ma na-agba ume 'n'echiche nke akparamagwa nwoke na nwanyị na nwa ha (yabụ) mgbe nwatakịrị nakweere omume ndị a. , nne na nna ahụ gbanwere site na mmekọrịta dị n'etiti ya na nwatakịrị ahụ wee nwekwuo mmetụta na mmetụta na-ekpo ọkụ. ' 'Mmekorita nke symbiotic' kewapụrụ nwa ahụ n’ebe ndị ọgbọ ya nọ: ‘mmekọrịta na-emekọ ihe ọnụ gbochiri mmepe nke ọrụ mmekọrịta ọha na eze, na-eme ka ndabere nke dyadic sie ike.
Ọgwụgwọ gụnyere ịnabata 'ngalaba akparamaagwa' mgbe ha na-aga ụlọ akwụkwọ dị nso. N’ebe abụọ ahụ a gbara nwatakịrị ahụ ume ka ya na ụmụaka ndị ọzọ na-egwuri egwu ma mụta ‘ịkpa àgwà kwesịrị ekwesị’ ’ma ọ bụghị‘ ndị n ’ụlọ ọrụ ahụ mere mgbalị iji gbaa ụmụ oke ume. Naanị otu ihe enyere n'iwu bụ ka ụmụaka na-akwanyere nzuzo nke ndị ọzọ, gharakwa izu ohi 'uwe ime'. A gbara ndị nne na nna ume ka ha na-abịa eleta ha mgbe niile ma soro ụmụ ha na-eme ihe omume.
Kedu ihe mere? 'Uwe ejiji kwụsịrị ngwa ngwa mgbe nnabata… Ọtụtụ n'ime omume ndị ọzọ, nke dị kemgbe ọtụtụ afọ, na-apụ n'anya ka ọtụtụ izu gasịrị. Achọpụtara mmelite nke 'ọnọdụ mmụọ' na 'mmezu nke ụlọ akwụkwọ na akparamagwa mmekọrịta ka ọ na - agbanwewanye nwayọ ...' Ka ọ na-erule ngwụsị izu ọnụnọ nke izu 18, 'ụmụaka ahụ na-arụ ọrụ na-elekọta mmadụ na agụmakwụkwọ' maka afọ ndụ ha.
Otú ọ dị, Kosky na-akọ na 'mgbanwe mgbanwe dị otú ahụ na omume ụmụaka mere ka ndị nne na nna niile nwee nchegbu'. Otu nne nwere 'ụjọ' mgbe nwa ya nwoke dị afọ 10 laghachiri iji ejiji. Mgbe ọ 'nọdụrụ ala', ọ 'kwụsịrị ejiji'. Mgbe ahụ ọ malitere 'imebi ọgwụgwọ ahụ site n'iwebata uwe nwanyị ... yana iche iche na ya n'ime ụlọ ya'. N'ikpeazụ, ọ tọhapụrụ nwa ahụ megide ndụmọdụ ahụike. Ahụghị ya ọzọ.
A na-enyocha ọganihu nke ụmụaka ndị ọzọ afọ otu mgbe mpụsịrị ha mana enwere usoro ọgwụgwọ ọrịa psychiatric. Werelọ akwụkwọ, mmepe mmekọrịta ọha na eze na ito nke nnukwu ka a na-ekpebi na ha nwere ezi uche. Uwe ejiji malitere ịmaliteghachi na otu afọ isii na njikọta na ogologo oge nke nna, na-emesi nnabata nnabata izu isii. Emechara hụ ya na 2 afọ mgbe ọ kọwara dị ka nwoke nke nwoke na-edina ụdị onwe ya na-enweghị ụdị okike nwoke na nwanyị.
Afọ asatọ mgbe ọ gbasasịrị, mana ya na mmekọrịta mmụọ na-aga n'ihu, otu 17 otu afọ kwupụtara na 'ọ gwakọtara' gbasara mmekọahụ ya, kwenye na 'nne ya' mere ya ka ọ bụrụ nwoke na nwanyị. Ọ dịghị onye n'ime ndị ọzọ 'kwupụtara mmetụta nke mmekọ ụdị n'ụdị, bụ transvestite ma ọ bụ transexual'.
Kosky kwupụtara na 'ikwubiga okwu ókè banyere ụdị okike nke dysphoria okike' nwere ike ibute 'enweghị nchekwube': agwara ụfọdụ ndị nne na nna na 'enweghị olileanya'. Otu dụrụ ọdụ na 'nwatakịrị ahụ ga-aga New York maka mgbanwe mgbanwe mmekọahụ'. Kosky kwubiri 'ọgwụgwọ nke omume nwoke na nwanyị site na ọgwụgwọ ọrịa na-egosi na ọ dị irè' na 'mesiri ike na ezinụlọ na mmekọrịta mmekọrịta nke nsogbu ahụ kwesịrị igbochi nrụgide na-enweghị isi na omume onwe ha behaviors (nke)… yiri ka ọ bụ ngosipụta dị elu nke enweghị nsogbu mmekorita onwe onye na ezughi oke nke mmekorita nke ndi nne na nna na umuaka. '
Na 2012, Zucker na ndị otu ya tụlere ahụmịhe ndụmọdụ ha na ụmụaka 590 sitere na 2-12 afọ zoro aka na Center ha maka Ntinye na Ahụike Uche kemgbe e guzobere na Toronto na 70.[xviii] Mgbe ogologo oge, mkparịta ụka mmeghe ekwentị, ọ bụrụ na enyere ya aka, a ga-akpọ nwatakịrị ahụ na ezinụlọ ya maka nyocha mgbe nleta 3-4. Ọ bụrụ na tozuru oke, dị ka akwụkwọ nyocha nke akwụkwọ nyocha nke sayensị si nwee ahụike uche, a ga-akpọ nwatakịrị ahụ na ezinụlọ ya ka ha gaa nyocha ahụike nke nwere ike ịga n'ihu ruo ọtụtụ afọ site na ike nke otu 5 dị afọ gosipụtara onye nwere 112 ya.th nnọkọ ọgwụgwọ mgbe 9.
A ga - agba nwa dysphoric ahụ ume ka ọ 'nwee ntụsara ahụ ya', ya bụ, ịhazigharị ọnọdụ okike. Nke a ga - eme ka nsogbu nke mmadụ na ezinụlọ belata naanị, kama zere 'ihe mgbagwoju anya nke ịwapụ mmekọahụ na ọgwụgwọ ya'. Otú ọ dị, ọ bụrụ na, 'otu nwa okorobịa… yikarịrị ka ọ ga-anọgidesi ike n'okporo ụzọ na-aga ịwa ahụ na mmeghari ahụ', Zucker kwupụtara na 'usoro ọgwụgwọ anyị bụ nke na-akwado ụzọ a'[xix]. Zucker akọọrọ ọnụego nkwụsi ike nke 12% nke ụmụ agbọghọ emetụtara yana 13.3% ụmụ nwoke mana amabeghị ole mmadụ nọgidere na-etinye aka na ịwa ahụ na ịwa ahụ, ma ọ bụ na ọ na-enyere aka. [xx]
Psychotherapy gụnyere '(a) kwa izu na-egwu psychotherapy maka nwatakịrị ahụ, (b) ndụmọdụ izu nne na nna ma ọ bụ psychotherapy, (c) ndị nne na nna na-eduzi mmechi na gburugburu ebe obibi (dịka ịchọpụta oke maka oge na ebe akwa akwa) na (d) mgbe chọrọ 'ọgwụ psychotropic.' A ga-amata ihe ndị metụtara biopsychosocial, nyochaa ma lebara anya: n'ime nwatakịrị nwoke nke na-enweghịkarị nsogbu na ọgba aghara, enwere ike ịme ka mmadụ nwee ùgwù onwe ya site na iwebata ụmụ nwoke nwere ụdị mmasị ahụ. Ihe ndị metụtara psychosocial nwere ike ịgụnye mmetụta na-adịgide adịgide nke nnọpụiche nne na nna ma ọ bụ agbamume n'ezie maka ejiji obe. Enwere ike inwe njedebe nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya: enweghị mmasị n'esemokwu nwere ike ime ka nwa nwoke chee na ọ bụ nwa agbọghọ. Mkpakọrịta psychopathology dị ka autism nwere ike ịkpalite echiche banyere ọrụ mgbatị. Ihe nrịba anya nke uche nwere ike ịgụnye ịnyefe nsogbu nke nne na nna na-edozighị nwa.
Ebumnuche nke psychotherapy abụghị iji gosipụta 'ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe na-ezighi ezi' kama iji nyere ndị nne na nna aka ịghọta 'ihe kpatara nwa ha ji nwee mmetụta': inyocha na ịtụle 'ụzọ kachasị mma iji nyere ha na nwa ha aka. Usoro ọgwụgwọ a chọrọ ijibelata dysphoria nwata ahụ, ma ọ bụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwoke nwere mmasị nwoke. Zucker kwusiri ike 'ụzọ anyị na ndị nne na nna ga-esi mee ka a mata na elu omume nke (dysphoria okike) bụ', 'ihe mgbaàmà' yana na a ga - akachasị enyere aka mgbapụta ma ọ bụrụ na a ghọtara usoro ndị kacha dị mma. '
Na 2015, a katọrọ usoro ọgwụgwọ Zucker dị ka 'ọgwụgwọ ntụgharị' site n'aka ndị ndọrọndọrọ na Prọfesọ a onye duuru mba ụwa ọtụtụ iri afọ guzoro ma ngalaba ya mechie .. Nke a bụ ike nke echiche nke oke mmiri nke nwoke na nwanyị.
Fọdụ atụmatụ mbu nke dysphoria okike nwata dị iche na taa. Ọ bụ mgbe ahụ ụkọ: ugbu a abụghị. Kosky kọrọ akụkọ ntụgharị nke 8 karịa afọ 5: ugbu a ụlọ ọgwụ kwekọrọ na akụkọ 2-3 pụtara otu izu. Ọ dịghị onye n'ime ndị ọrịa Kosky natara homonụ. Ugbu a, narị ndị ntorobịa Ọstrelia ole na ole yiri ka ha na-enweta ọgwụgwọ oge niile. Ihe karịrị 30 nwere ike ịwa ahụ na-enweghị atụ nke ọtụtụ ndị ọzọ na-akọ na ha na-eche[xxi].
N'otu oge, ụmụ nwoke ndị nwere mgbagwoju anya meriri. Ugbu a, ụmụ agbọghọ nọ n'afọ iri na ụma na-enweghị nsogbu na-apụta na ọnọdụ mmụọ: 'mmekọrịta na mmekọrịta ọgbọ na ndị ọgbọ'[xxii]. N'ihi nke a, ekwesịrị nyocha banyere mmetụta nke mmụọ na njirimara nwoke na nwanyị nke mgbasa ozi mmekọrịta na ịntanetị (n'ihu ụka ndị ụka Ọstrelia Ọstrịa Ọtọdọks) na arụ ọrụ psychotherapy kwesịrị ekwesị. Girlsmụ agbọghọ na-agbake site na foto ndị gba ọtọ?
O nweghi onye na-arịa ọrịa ọfụma ugbu a nke e nyere ka ọ bụrụ otu ugboro, ọgwụgwọ na-abụghị ọgwụ. N’ezie, n’agbanyeghi akuko banyere uru ọgwụgwọ di, ma oburu na otu ndi oru mmeri gara n’ibe iwu n’iru nkwuputa ogbara ohuru n’obodo ogbara ohuru, ikwulita okwu oma banyere usoro ogwu a ga-emebi iwu.
Ndi otu ndi otu oru a choro ka ndi oru ya mara na ha ekwenyeghi na ha na emeputa umuaka nwoke na nwanyi, nani ebe ndi ozo na egwurugwu? Ọ chọrọ ka ha mara nke ọma na ọ bụrụ na mkpụrụ na-enwe nsogbu nwoke na nwanyị na Party ga-enwe iwu megide mkparịta ụka na omume nke ụzọ ọ bụla ọzọ na homonụ na ịwa ahụ? N'ikpeazụ, ọ bụghị 'mgbanwe' nke nwatakịrị na nwoke ọzọ bụ ụdị ọzọ nke 'ọgwụgwọ ntụgharị', na-eji ụzọ ochie na ihe arụ nke mgbatị mmụọ, homonụ na ịwa ahụ, ALP chọrọ ịkwụsị?
[I] Josh Taylor Buzzfeed. Labour kwenyere iwu nke imebi mmekọ nwoke na nwoke.
[I] Jones T, Brown A, Carnie L et al. Na - egbochi mmerụ ahụ, na - akwalite ikpe ziri ezi. Zaghachi na usoro ọgwụgwọ LGBT na Australia. Melbourne: GLHV @ ARCHS na Centerlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihe Ruuru Mmadụ, 2018.
[iv] Ibid, p 9.
[v] Ndị isi okpukpe na ndị ọrụ ahụike nwere ike ịnwe mkpesa maka ntụgharị nke 'nwoke nwere mmasị nwoke'. Sydney Morning Herald. Mee 16, 2018
[vi] Ibid, p 5.
[vii] Ms Hennessy. Ọgụgụ akwụkwọ ọgụgụ maka ahụike. Ndị omeiwu Victoria. Hansard. Feb 10, 2016.
[viii] SBS. Banmachibido ọgwụgwọ ọgwụgwọ nwoke na nwanyị ga-abụ ihe mbụ maka ọrụ
[ix] Littman L. Rapid bidoro dysphoria okike ntorobịa na ndị ntorobịa: Nnyocha gbasara akụkọ nne na nna. PLoS ONE 13 (8): e0202330.
[X] Ibid, Ebube nke enweghi ntụpọ.
[xi] Rekers GA, Kilgus M, Rosen A. Mmetụta ogologo oge nke ọgwụgwọ maka nsogbu njirimara nwoke na nwanyị. Akwụkwọ akụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya: Mmekọahụ mmadụ. 1991; 3 (2): 121-153.
[xii] Rekers GA. Mmepe nwoke na nwanyị na nke na-agbazi mmekọrịta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Journal of ተግባራዊ agwa Analysis. 1977; 10 (3): 559-571.
[xiii] Pauly I. Nwanyị transsexualism: Nkebi nke 2. Archives nke omume mmekọahụ. 1974. 3 (6): 509-524.
[xiv] Stoller RJ. Mkpokọ nwoke na nwoke: ihe gbasara ọgwụgwọ.
[xv] Omume Zuger B. Kpamkpam dị ugbu a n'ụmụaka nwoke site na nwata: afọ iri ọzọ sochirinụ. Comprehensive Psychiatry. 1978; 19 (4) (July-August): 363-369.
[xvi] Lothstein L, Onye nwa nwoke na-arịa ọrịa dysphoric na-eto eto: ịbịaru ọgwụgwọ na njikwa. Akwụkwọ nke Pediatric Psychology. 1980; 3 (1): 93-109 ..
[xvii] Osmụaka Kosky RJ Ogbenye ụmụ nwanyị: ọgwụgwọ inpatient na-enyere aka? MJA.1987: 146; June 1: 565-569.
[xviii] Zucker KJ, Wood H, Singh MA, Bradley SJ. Oge mmepe, usoro biopsychosocial maka ọgwụgwọ ụmụaka nwere nsogbu njirimara nwoke na nwanyị. J nwoke idina nwoke. 2012. 59 (3): 369-397.
[xix] Zucker KJ, Bradley SJ, Owen-Anderson A et al. Oge uto na-egbochi ọgwụgwọ homonụ nke ndị ntorobịa nwere nsogbu njirimara nwoke na nwanyị. Ọmụmụ banyere mmụta. Journal of Gay na Ahụike Uche Lesbian. 2011; 15: 58-82.
[xx] Singh D, Bradley SJ, Zucker KJ. Nnyocha ọzọ gbasara ụmụ nwoke nwere nsogbu njirimara nwoke na nwanyị. Ngosiputa ederede na onodi omumu ihe omumu banyere ihe nmekorita nke nwanyi: gini bu ya, oleekwa otu o si aru oru? Mahadum nke Lethbridge. Canada.
Na Zucker KJ, Wood H, Singh MA, Bradley SJ. Oge mmepe, usoro biopsychosocial maka ọgwụgwọ ụmụaka nwere nsogbu njirimara nwoke na nwanyị. J nwoke idina nwoke. 2012. 59 (3): 369-397.
[xxi] Strauss P et al. Transzọ Okporo ụzọ. Ahụmahụ ahụike ahụike na ụzọ nlekọta nke ndị na-eto eto trans. Nchikota nsonaazụ ya. Telethon ụmụaka Institute. Perth, Australia. 2017.